प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीको विवाह फागुनमा – Halkhabar kura
१७ माघ २०७६, शुक्रबार ०८:५३
प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशीको विवाह फागुनमा
काठमाडौं । नायिका प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीको विवाहको मिति पक्का भएको छ। उनीहरूले यही फागुन १७ गते वैवाहिक जीवनमा बाँधिने निर्णय गरेका हुन्। पारिवारिक सहमतिमा उक्त मिति तय भएको हो। विवाहको लागि टिका टाला गरेको दुई वर्षपछि उनीहरूको विवाह मिति तोकिएको हो।
केही दिन अघि विवाह हुने निश्चित भएपछि प्रियंकाले आफ्ना नजिका साथीहरुलाई बोलाएर ब्याचलर पार्टी दिन थाइल्यान्ड पुगेकी थिइन्।एक पछि अर्को गर्दै तोकिएको विवाह मिति सार्दै आएका उनीहरू केही दिन यता विवाहको मुडमा देखिएका थिए।
यसअघि ज्योतिषीले राम्रो साइत छैन भनेकाले बिहे रोकिएको थियो। आयुष्मान र प्रियंकाले आफ्नो र परिवारको ग्रह कमजोर भएको कारण उचित लगन जुराएर मात्र विवाह गर्ने योजना बनाएका थिए।
उनीहरूलाई ज्योतिषीले नै यो कुरा सुझाएका थिए। अब भने सबै कुराको ठिक भएको सुझाव ज्योतिषीले दिएपछि उनीहरु लगनगाठो कस्न तयार भएका हुन्।
नायिका प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीको विवाहको मिति पक्का भएको छ।
उनीहरूले यही फागुन १७ गते वैवाहिक जीवनमा बाँधिने निर्णय गरेका हुन्। पारिवारिक सहमतिमा उक्त मिति तय भएको हो। विवाहको लागि टिका टाला गरेको दुई वर्षपछि उनीहरूको विवाह मिति तोकिएको हो।
Previous नेविसंघको तदर्थ समितिको अध्यक्षमा राजीव ढुंगाना
Next प्रतिनिधि सभामा आज विभिन्न प्रतिवेदन र शोक प्रस्ताव पेश हुने
फोर्ब्सको धनाढ्य सूचीमा परेका रोहित तिवारीसँग आज बिहे गर्दै नायिका केकी अधिकारी !
८ बैशाख २०७९, बिहीबार ०६:२९
पुरुषलाई महिलाको स्तनमा किन यति धेरै चासो ?
२९ चैत्र २०७८, मंगलवार १२:१२
राजेश हमाल आएपछि हिरो बनेर नाम कमाउँछु भन्ने सपना त्यागे – गायक धीरज राई (भिडियो)
२० चैत्र २०७८, आईतवार १७:०९
एमाले अध्यक्ष ओलीको निष्कर्ष : हारको प्रमुख कारण अन्तर्घात
रविन्द्र मिश्रले सुसंस्कृत राजनीतिको उदाहरण पेस गर्नुभयो : समीक्षा बास्कोटा
उपमहानगरपालिकाका सुकुम्बासी मेयर
गठबन्धनजस्तो छ, नीति तथा कार्यक्रम पनि तस्तै: विष्णु पौडेल
करोडको गाडी चढेर जनताको समस्या देखिदैँन, आफ्नै पुरानाे माेटरसाइकल चढ्छु’
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १६:४९
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १६:४५
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १६:४०
११ जेष्ठ २०७९, बुधबार १६:३१